सभामुखको बरीयताबारे बाबुरामको आपत्ति – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १३:३६ English
काठमाडौँ, १४ माघ । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एव पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सभामुखको बरीयतामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्को सभामुख नै बरीयतामा तल रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
संसद् आफैंले जन्माउने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, सदनले बनाएका संविधान र कानून व्याख्या गर्ने अदालतको प्रधानन्यायाधीशभन्दा सभामुखलाई तलको बरीयतामा राखिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘जन्माउने आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ?’
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले संसदले बौद्धिक नेतृत्व पाएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको प्रशंसा समेत गरे । ‘सभामुखप्रति व्यक्तिगतरूपमा पनि प्रसन्नता व्यक्त गर्न चाहन्छु । २०४७ सालपछि २५ वर्षसम्म निकटतामा रहेर काम गर्‍यौं । यहाँका गुणहरू सम्झिन्छु । बौद्धिकता, कामप्रतिको इमान्दारिता र समर्पणले सदनले बौद्धिक नेतृत्व पाएको छ,’ उनले भने ।
१४ माघ २०७६, मंगलवार १५:१८ मा प्रकाशित